Foshan Ruiniu အဝတ်အစား Co. , Ltd မှ. Nanhai မှာတည်ရှိပါတယ်, Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်နိုင်ငံ, isapowerful manufacturer specialized.
4.Non-poisonous, harmless and odourless . Made with handpickd formula and advanced technologies, the product is soft, comfortable, nonskid and easy to operate, with good protection and physical performances.
Size L(4 g) M(3.5 g) S(3g)
Application Safety Work\_Consturction Work\_Industrial Work\_Household work Hospital, Food industry, Laboratory, စသည်တို့ကို
Advantage Protective, Good Grip, Comfortable, Breathable
• အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်：+86-0757-86269715
• အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်: +86-18928650351
• အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်:3ကြမ်းပြင်, Xiyueqijian ရှုပ်ထွေးသောအဆောက်အ ဦး, Leigang ရပ်ရွာ, Guicheng Subdistrict, အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်,ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်,တရုတ်နိုင်ငံ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။：တစ်ခါသုံးအကာအကွယ်အဝတ်အစားထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း